China CNC Pipe Threading Lathe orinasa sy mpanamboatra | Oturn
1. Ity lathe fantsom-pohy CNC ity dia noforonina vaovao.
2.Ny fandriana dia vita amin'ny rafitra rindrina telo sosona tany am-boalohany, ary ny rindrina aoriana dia voalamina amin'ny hantsana 12 °. Ny sakan'ny lalamby mpitari-dalana amin'ny fandriana dia 550mm. Izy io dia novonoina tamin'ny feo avo sy nifototra mba hiantohana ny fahamarinan'ny ain'ny milina.
3.The integral gearbox karazana spindle unit, in-haingam-pandeha inverter, stepless ao amin'ny fitaovana; ny motera lehibe dia ny motera Beijing CTB spindle servo, izay tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famitana kofehy ihany, fa koa mahavita manapaka mahomby. Hafa tanteraka noho ny lathe CNC izay novaina noho ny lathes mahazatra.
4.Ny fampiharana ny famonoana fametahana fitaovana ary ny kalitao avo lenta dia manome antoka fa tsara ny tabataban'ny milina.
5.Ny lohan-doha dia mampiasa rafitra fanosotra mangatsiaka ivelany, izay tsy mampihena ny fiakaran'ny maripanan'ny fody fotsiny, fa mitazona tsara ny vatan-doha ihany koa.
6.Ny famaky X sy Z dia mandray fiara mivantana mivantana ary mitarika volo mihantona. Ny hanger-n'ny vovoka Z-axis dia rafitra fanariana tsy mitombina. Ny lalamby mpitari-dalana dia mifamatotra amin'ny fehikibo malefaka YT. Ny sakan'ny skateboard amin'ny lasely fandriana dia 300mm ary 550mm ny lavany. Amin'ny ankapobeny, ny haben'ny karazan'ity milina ity dia 280 sy 480mm, izay manatsara ny fitarihana mazava tsara sy ny marimarinan'ilay fitaovan'ny milina, ary manatsara ny androm-piainan'ilay masinina.
7.Ny fitaovam-pandehanana lehibe an'ny fitaovan'ny milina dia novokarin'ny SMTCL; ny metaly fiarovana dia namboarina tsy miankina ary vita amin'ny takelaka vy mangatsiaka mahazatra.
Max.turning savaivony ny vatan'ny masinina
Max.turning savaivony ny mpitazona fitaovana
Ny sakany fandriana
Diamondra isan-karazany ny fantsona fantsona
Chuck eo aloha
Chuck manual-rahangy telo Φ400
Chuck manual-rahangy telo Φ500
Chuck manual-valanoranona efatra Φ800
Mioraka any aoriana
Fitsangatsanganana axis X
Spindle centre mankany amin'ny fametahana fitaovana datum
Haben'ny fizarana fitaovana
Mpitazona fitaovana elektrika misy toerana efatra
Savaivony tanany Tailstock
Taper lavaka fandresena
Fanamafisana ny fivezivezena ivelany
Haavo miovaova amin'ny herinaratra
Teo aloha: Latina Drive lathe ho an'ny Roller manohana
Manaraka: Gantry Type CNC ary atsofony sy milina fanodinana